peptide engcono Better ubomi
Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd ishishini eliphezulu-zobugcisa benza uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye kushishino peptides ezisekelwe iimveliso kubandakanywa peptides ezisebenzayo zoxubo mayeza nto, peptides izithambiso, kunye peptides nesiko kwakunye nophuhliso peptide ichiza elitsha. JYMed uye zinikezelwa ngokupheleleyo-owned ezimbini: Shenzhen JYBio Pharmaceutical Co., Ltd kunye Hubei Jy Pharmaceutical Co., Ltd, ephantsi kusakhiwa.
【R & D iziko】
R & D iziko JYMed kaThixo, ibekwe Shenzhen, Umiswe yophando kunye nophuhliso kwezinto ezintsha zamachiza, APIs peptide kunye neemveliso efanelekileyo. Eli ziko kufakwa mihla peptide synthesizer, ezinkulu-umthamo wamanzi zokuhlanjululwa preparative, kunye nezixhobo ezibanzi zohlalutyo kuquka MS, solibalo, GC, UV, IC njl Iziko R & D kwakhona inika inkxaso iteknoloji entsha zombini inkqubo lokufumanisa iziyobisi kunye iimveliso ukuthumela.
JYMed inomgca ezine imveliso peptide API e Nanjing ngokungqinelana kunye nokuthotyelwa FDA cGMP, kwaye umthamo imigca yemveliso zebhayoloji ogqityiweyo ezimbini Shenzhen ezinokunika iibhetshi lwezorhwebo injectables peptide injectables amancinci amandla kunye neemveliso nomgubo ngumkhenkce-ezomisiweyo phantsi kwezikhokelo cGMP. Ukongeza, sakha up lines yemveliso elinesithandathu ukuze peptide API e Xianning, kwiphondo Hubei, China, nto leyo eya kuba enye enkulu isiseko sokuvelisa peptide API e China.
JYMed uye inkqubo peptide mveliso ngokupheleleyo nangokufanelekileyo, sibonelele ngenkonzo peptide ebanzi, kuquka CRO / injono / CDMO / OEM kunye nemicimbi Regulatory inkxaso. Ukuze ube kumthengisi wakho ethembekileyo, elizimeleyo yovukelo ngenxa peptides zakho!
Amanani Key of JYMed
iilebhu ● 2 RD (Pingshan, Nanshan)
● 3 wezibonelelo zokuvelisa
● APIs, Nanjing Lishui, Jiangsu, imigca yemveliso 4 ngokuthobela FDA
● APIs, Xian'ning, Hubei, imigca yemveliso 16 ngokuthobela FDA (phantsi kolwakhiwo)
● imveliso zigqibele, 2 imigca idosi e Shenzhen Pingshan, Guangdong
● 7 iimveliso ezingeniswe Anda ukuya CFDA, iimveliso 5 ngaphantsi filing
● 1 imveliso IND zingeniswe CFDA
● 1 imveliso zingeniswe VMF (US-FDA) kwaye wafumana isatifikethi ¸cep